Kambani yeMetallion Yopomerwa Mhosva yeKuramba Kuripa Vanhu Vakapfurwa Vachichera Goridhe muMinda yeRedwing
Vanhu vakawanda vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo vanonzi vari kushungurudzwa
Vamwe vagari vekuPenhalonga vopomera mugodhi weRedwing uri pasi pekambani yeMetallion Management Pvt Limited, mhosva yekusakoshesa hupenyu hwevanhu.
Izvi zvinotevera kupfurwa kwevarume vaviri nevanochengetedza mugodhi uyu vachiuraya mumwe murume pamwe nekukuvadza mumwe mugari anonzi aiedza kubatsira shamwari yake yakanga yapfurwa.
Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuchera goridhe mumunda wekambani iyi zvisiri pamutemo.
Amai Violet Munorwei, mudzimai wemushakabvu VaTafadzwa Lewani vaudza Studio 7 kuti kubva zvaurawa murume wavo vakangowana mazana manomwe emadhora uye vanoti vakuru vemugodhi weRedwing havachadi zvehurukuro dzavaive vavimbisa.
VaDavid Madzikatire ndemumwe wevakapfurwa musi waurawa VaLewani. VaMadzikatire vanoti vakapfurwa vaenda kunotora mushakabvu VaLewani avo vaive shamwari yavo. Kunyangwe zvazvo vakakuvara zvakaipisisa VaMadzikatire vanoti havana kana rubatsiro rwavakawana kubva kumugodhi weRedwing.
Vaviri ava vanoti vave kuzoendesa mugodhi uyu kumatare edzimhosva kuti varipwe sezvo vakuru vemugodhi uyu vari kuramba kutaura navo.
VaJacob Mafume vanova gweta rave kubatsira vaviri ava kuenda kumatare vanoti kuurawa nekushungurudzwa kwevanhu vanogara munharaunda mune zvicherwa kuri kuramba kuchikwirira nekudaro vachange vachibatsira vaviri ava kuti mimwe migodhi idzidze kukosha kwehupenyu.
VaFarai Maguwu mukuru wesangano rakazvimiririra reCentre for Natural Resources Governance (CNRG), vari murwiri wekodzero dzevanogara kunowanikwa zviwanikwa vanoti makambani ari kuchera zvicherwa muZimbabwe ari kuregwa achiita madiro aJojina asi vachikonzera ndufu zhinji.
Pavakanyorerwa tsamba nemagweta ekuti vachasungiswa nekutadza kubatsira mhuri mbiri idzi mushure mepfumvu yakakonzerwa nevanochengetedza mugodhi uyu, vakuru vekambani yeMetallion, inova murudzi wemugodhi weRedwing vakaramba kuti vane chekuita nevaviri ava kuburikidza netsamba iri mumaoko eStudio 7.
VaCleton Matsika, avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya VaLewani pamwe nevamwe vavo vanoti VaWilliam Mutuswa naVa Benedict Chikanda vari kupomerwa zvakare mhosva yekuda kuuraya VaMadzikatare, uye pari zvino vari kunze mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu yakatarwa nedare.